NGO Forum - Nepal - भूमिगत पानी निकाल्न अब लाइसेन्स NGO Forum - Nepal - भूमिगत पानी निकाल्न अब लाइसेन्स
भूमिगत पानी निकाल्न अब लाइसेन्स
काठमाडौ : कुनै पनि माध्यमबाट व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भुमिगत पानी निकाल्न सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । डिप बोरिङ, टयुबवेल, इनार आदिबाट जमिनमुनिको पानी निकाल्न सरकारले लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । राजधानीमा रहेको ठूला होटेल, अपार्टमेन्ट, पानी बिक्रीवितरणमा संलग्न व्यवसायी र उद्योगलाई लक्षित गरेर यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
अनियन्त्रित रुपमा भूमिगत पानीको प्रयोग बढेपछि राजधानी भासिने खतरा बढदै गएको चिन्ता विज्ञहरुले गरेका छन् । अहिलेसम्म भूमिगत पानी निकाल्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छैन र भूमिगत पानीको प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट नीतिनियमसमेत छैन । भूमिगत पानीको ठूलो कारोबार भए पनि सरकारले त्यसवापत राजस्व प्राप्त गरेको छैन । काठमाडौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले भूमिगत जलस्रोत व्यवस्थापन नीतिको मस्यौदा तयार पारेर भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । यसलाई छिटै मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिनेब बोर्डका कार्यकारी निर्देशक हरिप्रसाद ढकालले बताए । भूमिगत पानीको प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट नीति नुहँदा यसको अनुगमनमा समस्या भएको छ । जलस्रोत व्यवस्थापन ऐन २०४९ खानेपानी बोर्ड ऐन २०६६ संशोधन गरी उक्त नीति बनाउन लागिएको हो । 'मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि भूमिगत रुपमा पानी निकाल्न तथा प्रयोग गर्न चाहनेले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्नेछ' बोर्डका कार्यकारी निर्देशक ढकालले भने । घरायसी कामका लागि एउटा इनार बनाउन भने यो नीति लागु हुनेछैन ।
काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)ले भूमिगत रुपमा दैनिक तीन करोड लिटर पानी निकाल्दै आएको छ । निजी स्तरबाट व्यवसायक प्रयोजनका लागि दैनिक पाँच करोड लिटर पानी भूमिगत रुपमा निकाल्ने गरएको अनुमान छ । केयूकेएलका प्रवक्ता सुरेश आचार्यले भुमिगत पानीको प्रयोगमा न्यूनीकरण गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । खानेपानी अभावका कारण उपत्यकामा पानी भूमिगत पानी निकाल्ने क्रम अनियन्त्रित छ । उपत्यकामा दैनिक ३२ करोड लिटर पानीको माग रहे पनि आपूर्ति भने मागको एक चौथाईमै मात्र छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगर्भ विभागका प्रमुख डा. सुरेशदास श्रेष्ठले भूमिगत पानी निकाल्ने क्रमले उपत्यकामा खतरा बढेको बताए ।
स्रोत : अन्नपूर्ण पोष्ट, ०६७ माघ ५, पेज नं. ५